A tọhapụrụ ụdị ọhụrụ nke VirtualBox 6.0 na mmelite ọhụrụ | Site na Linux
A tọhapụrụ ụdị ọhụrụ nke VirtualBox 6.0 na mmelite ọhụrụ
Virtualbox bụ ihe eji ewu ewu na-aga n'ihu ikpo okwu, nke anyị nwere ike iji gosipụta sistemụ arụmọrụ ọ bụla (ọbịa) site na sistemụ arụmọrụ anyị (onye ọbịa). Site n'enyemaka nke VirtualBox anyị nwere ikike ịnwale OS ọ bụla na-enweghị ịgbanwe ụdị ngwa anyị.
N'ime sistemụ arụmọrụ nke VirtualBox na-akwado bụ GNU / Linux, Mac OS X, OS / 2, Windows, Solaris, FreeBSD, MS-DOS, na ọtụtụ ndị ọzọ. Na nke anyị nwere ike ọ bụghị naanị nwalee usoro dị iche iche, kamakwa anyị nwekwara ike iji uru dị mma iji nwalee ngwaike na ngwa na sistemụ ọzọ karịa nke anyị.
Ka otu afọ nke mmepe siri ike na nsogbu ụfọdụ kpatara enweghị ntụpọ nchekwa na-adịbeghị anya (you nwere ike ịlele mbipụta ebe a) Oracle bipụtara mwepụta nke usoro VirtuualBox 6.0.
Ihe ntinye ntinye di njikere maka Linux (Ubuntu, Fedora, openSUSE, Debian, SLES, RHEL na ulo oru AMD64), Solaris, macOS na Windows.
1 Banyere VirtualBox 6.0
1.1 Akwụkwọ ndị ọzọ
2 Esi VirtualBox 6.0?
Banyere VirtualBox 6.0
Site na ntọhapụ VB ọhụrụ a, mgbanwe dị iche iche na mmezi ahụhụ na-eme, na karịa ihe niile, ọtụtụ agbakwunyela na ngwa ahụ.
N'etiti nke enwere ike ịkọwapụta ọtụtụ ndozi na ntanetị onye ọrụ nke ngwa ahụyanakwa interface eserese ọhụrụ maka ịhọrọ igwe na-emepụta nke ọma.
E wezụga nke ahụ e megharịrị njikwa njikwa mgbasa ozi mepere emepe, nke ngwaọrụ iji jikwaa njirimara dịka nha, ọnọdụ, ụdị na nkọwa pụtara.
Enweela atụmatụ onye njikwa faịlụ ọhụụ na-enye ohere ịrụ ọrụ na sistemụ faịlụ ndị ọbịa na ịdegharị faịlụ n'etiti usoro nnabata na gburugburu ebe ndị ọbịa.
E tinye Network Manager iji mee ka njikwa netwọkụ na ntọala dị mfe.
Edegharịrị ọrụ pịrịpị foto ahụ, na-enye gị ohere ijikwa njirimara dịka aha foto na nkọwa.
A gbanwere ngọngọ nwere ozi ihe osise, nke gosipụtara ọdịiche dị iche na ọnọdụ nke igwe arụmọrụ ugbu a.
Mgbanwe ọzọ dị mkpa na nhapụ ọhụrụ a bụ na Enwere nkwado HiDPI na ọkwa dị ukwuu, gụnyere nchoputa na nhazi nke ọma na igwe.
N'aka nke ọzọ, gbakwunye ikike iche iche iji mee ka ụda na ndekọ vidiyo dị iche iche na usoro ntinye ngwa ngwa ndị ọbịa akpaghị aka, nke yiri atụmatụ "Easy Install" na VMware ma na-enye gị ohere ị bido sistemụ ndị ọbịa na-enweghị nhazi enweghị isi naanị site na ịhọrọ onyonyo ịchọrọ ịgba ọsọ.
Site na ndabara, VMSVGA eserese kaadị ọkwọ ụgbọala (VBoxSVGA kama VBoxVGA) ka agbanyere.
Agbakwunyere nkwado maka ọkwọ ụgbọ VMSVGA na nkwụnye maka Linux, X11, Solaris, na sistemụ ndị ọbịa dabere na Windows.
Emeela nkwado maka eserese 3D na Linux, Solaris na ndị ọbịa Windows.
Ikike nke imegharị ihe oyiyi disk n'oge riri ahụ emejuputara.
Nke Akụkụ ndị ọzọ enwere ike ịpụta ìhè na ntọhapụ nke VirtualBox 6.0 ndị a:
A na-ebufe emulation HDA ngwaọrụ ọdịyo gaa na nhazi data data asynchronous ma gbuo ya na mmiri dị iche.
Ofu ụda distortion mgbe iji PulseAudio akwado.
Edozi nsogbu ahụ na ndekọ ụda mgbe ị na-eji nkwado ALSA.
Mma video nhazi mgbe ị na-eji EFI.
Agbakwunyela ụdị ọhụrụ nke ngwa BusLogic ISA a theomiri.
Agbakwunyere ikike igbanwe ọdụ ụgbọ mmiri agbakwunyere na-enweghị ịkwụsị igwe arụmọrụ.
Enwekwukwa njikwa API nke ndị ọbịa.
Usoro nchekwa nchekwa na-agbakwunye nkwado maka arụmọrụ Memory Buffers arụmọrụ maka ngwaọrụ nchekwa NVMe.
Esi VirtualBox 6.0?
Maka ndị nwere mmasị ịnata inweta ụdị VB ọhụrụ a, ha nwere ike ịkpọtụrụ gị ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị ebe ị nwere ike ịchọta installers awa site mmepe maka Linux.
N'aka nke ọzọ, ịnwere ike ichere ka emelitere ngwugwu ahụ na ụbọchị ole na ole na nchekwa nke nkesa gị, ebe ọ bụ na VB dị ezigbo mma ma dị n'ime ọtụtụ nkesa Linux dị ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » A tọhapụrụ ụdị ọhụrụ nke VirtualBox 6.0 na mmelite ọhụrụ
Ọnọdụ desktọọpụ KDE nwere ike ịbịaru ngwugwu Snap